That's so good, right?: February 2015
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားဟာ အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်က အပြာရောင် Website တစ်ခုမှာ အသင်းဝင်တွေအနေနှင့် ဆုံဆည်း ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်က ဘာကြိုက်တယ် တစ်ယောက်က ဘာမကြိုက်ဘူး မိတ်ဆက်ကြပြီးနောက်မှာတော့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကျေနပ်စဖွယ် cyber fucks သဘောအပြာရောင်စကားလုံးတွေနဲ့ နှစ်ခါလောက်တော့ ပြောဆိုဘူးကြပါရဲ့။ အခြားသူတွေလို ဘယ် ဖက်ရှင်ကတော့ မိုက်တယ်နော်တို့ ဘယ်မော်ဒယ်လ်ကတော့ အလန်းစားတို့ blur blur တွေမပြောဖြစ်ကြဘဲ လိင်ကိစ္စပဲဦးတည် ပြောဆိုဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါတော့။ သူ့ရဲ့ နာမည်ပြောင်ကတော့ Bigboy ဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ Viper ဖြစ်ပါတယ်။ အသွင်အပြင်တွေ အကြိုက်အလိုက်တွေ စကားလုံးတွေအရ သူသည် bottom အဖြစ်နေရတာ ကြိုက်စပြုနေပြီဆိုတာ ကျွန်တော်ရိပ်မိ သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ အလွန့်ကိုအစဉ်ပြေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ သူ့အနေနဲ့လိင်စိတ်ခံစားမှုမှာ အနည်းငယ်တော့ အရှက်သည်းပြီး ချီတုံချတုံနိုင်လွန်းတယ်ဆိုတာလေ။ တစ်လနည်းပါးကာလအတွင်း အွန်လိုင်းပေါ်ကနေသာ နှစ်ယောက်သား ပလူးနေကြတယ် အပြင်မှာ လက်တွေ့ ဒိတ်ကြဖို့တွေ့ကြဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ အခွင့်အရေးမရခဲ့ကြပါဘူး။
Web sites ပေါ်က သူ့ Profile မှာတော့ အတော် အရောင်အသွေးစုံလင်လှပါတယ်။ ပန်းချီမေဂျာကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ် တတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသတဲ့။ သူ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုက Bisexual ဖြစ်ပြီးတော့ သူနေ ထိုင်တဲ့နေရာက ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်နဲ့ အနည်းငယ်တော့လှမ်းပါတယ်။
[Viper] မြိုင်သာယာမြို့မှာပဲလို့ နေရပ်လိပ်စာရေးထားတယ်, bb? မြောက်ပိုင်း, တောင်ပိုင်း, အလယ်ပိုင်း?
[Viper] Ah, profile ကပြောတာတော့ မင်းက ပန်းချီပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတဲ့။ ဘယ် ism ကိုအားသန်နေလဲအခု?
[Bigboy] အဲလိုတော့မရွေးချယ်မိသေးဘူးဗျ, လတ်တလောတော့ Realism ဘက်ကိုဇောင်းပေးဆွဲဖြစ်နေတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ရှုခင်းတွေအများစုပေါ့နော်။
[Viper] Nude Art တွေကိုကော သရုပ်ဖော်ဆွဲသင့်တယ်နော့။
[Viper] ဟိုဟာလေ ကျွန်တော်က ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလှတာတွေကိုသဘောကျတော့ ကောက်ကြောင်းလှတဲ့လူတွေရဲ့ ပုံတွေကို သိမ်းထားတဲ့အကျင့်ရှိလို့မေးကြည့်တာပါဗျ။
[Viper] ဟုတ်တယ်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျ။ စိတ်ဝင်စားတယ် ဟုတ်?
[Viper] ကျွန်တော်တို့နေတဲ့တိုက်ရဲ့ မြေအောက်ခန်းကိုကြည့်ချင်တယ်လို့ ခင်ဗျားပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်?
(Pause သုံးမိနစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီးနောက် Bigboy တစ်ယောက် signed off လုပ်သွားတယ်chattingကို)
နောက်သုံးရက်လောက်ကြာပြီးနောက် chat room ထဲမှာ ကျွန်တော်အချိန်အတော်ကြာရှိနေချိန် သူတက်လာပြီးနောက် သူနဲ့သီးသန့် စကားပြောဖို့ private chat လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လာတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကိုအဆက်အသွယ်လည်းမလုပ် အတန်ကြာငြိမ်သက်နေပြီးမှ ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့ တွေးရပြီပေါ့။ သူပြောတဲ့စကားတွေကလည်း မထိတထိငြိတိတိ။
[Bigboy] ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆောက်အအုံတွေက ရှေးပုံစံတိုက်တွေများတယ်။ အပေါ်မှာက လူသွားစင်္ကြံတွေဆိုတော့ မြင်နေရတာ။
[Viper] မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားလိုချင်တာ တစ်ခုခုရှိကိုရှိတယ်။ ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွပ်ဖက်ကိုလာဖို့ပဲလိုတယ်လေ ကျန်တာက ညှိလို့ရပါတယ်ဗျ။
သူ နောက်တစ်ကြိမ် sign off လုပ်သွားခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်သည်လည်း chat room ထဲကိုနောက်နေ့ညနေခင်းအထိ မ၀င်ဘဲ ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီည သန်းခေါင်ယံလည်းရောက်ရောက် သူ ကျွန်တော့်ကိုမက်ဆေ့စ်ပို့ပါတယ် ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်ရှိ ရာ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းဘက်ကို ရုံးပိတ်ရက် စနေတနင်္ဂနွေတစ်ရက်ရက်မှာလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အဲ့လူကို ဆေးထိုးပစ်လိုက်တယ်။ သူပြောတဲ့ ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ဘာမှလုပ်လို့မရသေးကြောင်း ခရီးသွားစရာရှိကြောင်း အကြောင်းပြလိုက် တာလေ။ တကယ်တမ်းတော့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးရယ်။ တကယ်တမ်း သူစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် သူ့ဖာသာသူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစကား ပြောသင့်တယ် ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ပိုကြိုစားစီစဉ်သင့်တယ် မဟုတ်လား။ နောက်ဆုံးတော့လည်း သူ ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ဆုံဖို့ သဘော တူခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်နေတဲ့ တိုက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်မှာရှိတဲ့ ဂေးဘားတစ်ခုကိုလာခဲ့ဖို့ ဘားနာမည်ကိုညွန်းပြီး အဲ…ဘာဘား ဆိုတာပြောပြီးပြီးချင်း sign off လုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံကြဖို့ ပြောဆိုကြတဲ့ညမှာတော့ ကျွန်တော် သားရေဘောင်းဘီခပ်ကြပ်ကြပ် ၊ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ထင်လင်းမြင်သာစေမယ့် ဇာစွပ်ကျယ်သဘော ရှပ်လက်တိုတစ်ထည်ကို ၀တ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် abs ကိုကောင်းကောင်းပြသနိုင်သလို တောင့်တင်းတဲ့ ပေါင်တံတွေကိုလည်း မြင်သာစေနိုင်တာပေါ့နော်။ ညနက်ပိုင်းအမှောင်ရိပ်ထဲ အလုံးစုံပြသဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ညနေခင်းလေးဝယ် အတော် လန်းတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Surprise, Surprise တော်တော်အံ့အားသင့်ဖွယ်ပါပဲ။ သူသည်လည်း ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို လူတကာသွားရေကျအောင်ပြနေပါတယ် ကျွန်တော်ဘားထဲ ၀င်တာနဲ့မြင်ရတာ ထင်းကနဲလေ။ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့လူ ကျစ်လစ်သော တောင့်တင်းသော ကိုယ်ခန္ဓာပိုင် ဆိုင်ထားပြီး မျက်နှာကလည်း တော်တော်ဆွဲဆောင်မှုပြင်းထန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ တော်တော် အလန့်တကြားဖြစ်နေပုံရပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ကိုလက်ဝေ့ယမ်းပြလိုက်တော့ မှ မျက်အိမ်ကျယ်ကျယ်သူ့မျက်ဝန်းတွေက လက်ကနဲဖြစ်သွားပါတယ်။ မြင်နေရသမျှတော့ မကျေနပ်တဲ့ပုံဟန်မရှိ ပုံမှန်ထက်အသက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်နေသော လူတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုသာတွေ့ရလေခြင်းပါ။
သူ ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ခုံနားကို လှမ်းလာပြီးနောက် အတူယှဉ်ထိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သူထင်တယ် သူကတော့ ဘယ်သူပါဆိုတဲ့ မိတ်ဆက်ခြင်းလေးတွေအစပျိုးပြီးနောက် ဟိုဟိုသည်သည် အကြောင်းအရာမဲ့စကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားပြောတဲ့ အချိန်ကလေးတွေကြာ သောက်ထားတဲ့ သူရာရည်လေးတွေကြောင့် ရီဝေေ၀လေးတွေဖြစ်လာချိန်မှာ သူ့ကြည့်ရတာ အရှိန်ရ ရထား တစ်စင်းလိုဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်က မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ တစ်ယောက်တည်းပြန်ချင်ပြန်တော့လေ ကျွန်တော်ကတော့ မပြန် သေးဘူးလို့ စကားတောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူ့မေးကြောကြီးတွေ တင်းလာပြီး မပြန်သေးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ဘ၀က လိင်ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ရင် အတော်အပျင်းထူဖို့ကောင်းလာတဲ့အကြောင်း တသိမ့်သိမ့်ခံစားရတဲ့ ဖီလင်မျိုးကို ပေးချင်ရချင်လာနေပြီလို့ စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလာရော။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲ့လိုဖီလင်မျိုးရဖို့လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းပါတယ် ပြီးတော့ သူ့အနေနဲ့ ရှေ့ဆက်ဘာ လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ဘယ်လိုဆွဲကြမယ်ဆိုတာ မတွေးတောမိခဲ့သေးဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မီးစဉ်ကြည့်ကမလားလို့ပြောလိုက် တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်နေရာကိုသွားကြမယ် ဘာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာမှ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမှာလို့။ သူ တံတွေးကို ခက်ခက်ခဲခဲမျိုချလိုက်ပုံပေါ်တယ်ဗျ။ ပြီးမှ သူကမေးတယ် ကျွန်တော်နေတဲ့တိုက်ရဲ့ မြေအောက်ထပ်ကို လိုက်ပြမယ်ဆိုတဲ့။ အဲဒီအချိန် ဒီအချိန်တော့မဟုတ်ဘူးလေလို့ ကျွန်တော်စကားထပ်ဆိုလိုက်ပြန်တော့ သနားတောင်သနားမိပါရဲ့ သူ့မျက်နှာဝယ် သောင်းကြမ်းနေတဲ့ စိတ်ကို သိက္ခာမပျက်အောင်အတင်းထိန်းလိုက်ရပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် သူ့ကို ဒီည ကျွန်တော့်အိမ်က ဂိုထောင်အခန်းထဲ သေချာပေါက်လိုက်ချင်မှာပါလို့ပြောချင်နေခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကြိုးတွေဘာတွေနဲ့ ချီနှောင်တာတို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းရိုက်နှက်တာ တို့ကိုလုပ်ရင်ကော .ကြိုက်သလားသွေးတိုးစမ်းကြည့်ပြန်တော့ အမေးစကားဆိုကာရှိသေး သူ့ပေါင်ကြားကငပဲက အင်းဆိုပြီး ခေါင်းဆတ်ပြတာ ကိုင်မိတဲ့ကျွန်တော်တောင် လန့်သွားမိတယ်ဗျ။
ယာဉ်ရပ်နားရာမှ အထွက် ကျွန်တော့် Harley ဆိုင်ကယ်ပေါ် နောက်ကအသာတက်တယ်။ ဆိုင်ကယ်လည်း ကျွန်တော်တို့စတင်ထွက် ခွာလာတော့ သူ့လက်တွေက အစတော့ ကျွန်တော့်ပခုံး နောက်တော့ ကိုယ်လုံးကိုသိုင်းဖက်တယ်။ ဆိုင်ကယ်အစောင်းအတိမ်းအလုပ် မှာတော့ သူ့ကိုယ်ကြီးကိုရှေ့တိုးကပ်လာတာကြောင့် တောင့်တင်းတဲ့သူ့ပေါင်တံတွေ နောက်ပြီး သူ့ရင်အုပ်က အမွှေးနုတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ထိကပါးရိကပါးလုပ်လာသလိုပဲ။ နှစ်ယောက်သား လေထဲပျံဝဲနေကြပြီး အရှိန်ရလာတော့ သူ့အသက်ရှူသံတွေပြောင်းလဲ လာပုံရယ် တင်သားတွေနဲ့ မထိတထိဖြစ်နေတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားက မြွေဟောင်ခေါင်းထောင်ထလာတာကို ခံစားမိပါတယ်။ သူ မသိမသာ ထောင်ထနေတဲ့ မြွေဟောက်ကြီးကို ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းနဲ့ လာလာပွတ်တယ် ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲလမ်းတွေကိုဖြတ်သန်းမောင်းနှင်လာကြပြီးတဲ့နောက် အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့သော တောင်ကုန်းကျောက်တန်း လေးတွေရှိတတ်သော မြို့စွန်ဧရိယာဘက်ကိုဦးတည်လိုက်ကြပါတယ်။ အထပ်သုံးထပ်ကို နှစ်ထပ်ဘန်ဂလိုပုံဆောက်ထားသော ကား ရယ် ဆိုင်ကယ်တွေရယ် ချောင်ချောင်ချိချိထည့်လို့ရသော ကျွန်တော့်အိမ်ရဲ့ ကားဂိုထောင်ရှေ့ရောက်ဖို့ ၀င်းတံခါးကို အော်တိုစနစ် ခလုပ်ကိုနှိပ်လို့ဖွင့်ဝင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အပြင်ကလုံးဝဖွင့်မရတော့အောင် ပိတ်လိုက်ကာ ဂိုထောင်ထဲကိုတန်းပြီးမောင်းဝင်လိုက် ပါတယ်။ တံခါးတွေအတော်များများက Remote System နဲ့ဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ အသာအယာလေး ဟန်မပျက်ပေါ့။ ဂိုထောင် အလယ်လောက်ထိ မောင်းဝင်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဦးခေါင်းထက်ဝယ် စက်ရုံသုံးမီးချောင်းတွေလို အလင်းတန်းက ခပ်လင်းလင်းပဲ။ ကျွန်တော် ရပ်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာတော့ အားကစားစက်ဘီးတစ်စီးက အသင့်၊ Swiss Ball တစ်လုံး၊ Yoga ဖျာတစ်ချပ်က ကပိုကရို။ အားကစားပစ္စည်းတွေအတော်များများရှိနေသေးတာက ကျွန်တော့်ဝါသနာလို့ဆိုရမယ်လေ။ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းသော ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်က ကျွန်တော့်အတွက်ပဲမဟုတ်လား။ Bigboy လို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်ဖြစ်နေတဲ့ ငနဲက ဟိုသည်ကြည့်ပြီးနောက် အားကစား စက်ဘီးပေါ်တက်လို့ အသာအယာနင်းကြည့်တယ် သဘောကျနေဟန်တူပါရဲ့။ ကျွန်တော် ဂိုထောင်အနောက်ဘက် အိပ်ခန်းအသေး လေးထဲက အ၀တ်တစ်စုံရယ် သားရေလက်ပတ် ခြေပတ်တွေကို ယူလာလိုက်ပါတယ်။
‘ဒီမှာ အ၀တ်တွေအကုန်ချွတ်လိုက်ပြီး ဒါတွေဝတ်လိုက်ပါ’ ကျွန်တော် တိုက်ရိုက်ပဲ သူ့ကိုအမိန့်ပေးတဲ့လေသံနဲ့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်မယ့် လိုအင်ရှိနေသူမို့ပါ။
အ၀တ်တွေကို တစ်လွှာခြင်း တစ်လွှာခြင်းသူချွတ်နေရတာကို ကျွန်တော် တကယ်သဘောကျတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ပိုင်း အ၀တ်တွေကို ခွာမှ ဘာကြောင့် Bigboy လို့နာမည်ပေးထားမှန်းသဘောပေါက်ရပါတယ်။ သူ့ဝတ်စုံအသစ်က မသိရင် အရေပြားနောက် တစ်ထပ်စွပ်ထားသလားထင်ရမယ့် အသားကပ် အားကစားဝတ်စုံပါ။ ရင်အုပ် လက်မောင်း ပေါင်တံတွေနဲ့အပြိုင် ပေါင်ခွဆုံကနေ ရှေ့ကို ငေါထွက်နေတဲ့ငပဲကြီးကလည်း အဝေးကနေကြည့် မြင်နိုင်၏။ လဲဝတ်လိုက်ရတဲ့ အ၀တ်သစ်အပေါ် သူတော်တော်ကျေနပ်နေပုံရပါတယ် ငေါနေတဲ့ သူ့ငပဲကို မသိမသာ လက်နဲ့ဖိလိုက်ပြန်လွှတ်လိုက် မနေတတ်မထိုင်တတ်ပုံဟန်ကလည်းပေါ်နေပါတယ်။
‘ဒီကိုလာခဲ့ပါ၊ ခုံစောင်းပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးလက်တွေကိုမြှောက်ထားလိုက်’ ကျွန်တော်သူ့ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းက Incline ဆွဲတဲ့ခုံ စောင်းမှာထိုင်ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်တာပါ။
ခုံမှာထိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောသမျှ လိုက်နာနေသော သကောင့်သားရဲ့ အမိန့်နာခံတတ်မှုကို ကျွန်တော်အံ့အားသင့်ရသလို စိတ်ထဲက ကျေနပ်စိတ်နဲ့အတူ ဘောင်းဘီထဲက ညီဘွားကလည်း ထောင်းကနဲမတ်လာတော့တယ်။ သူ့ရင်အုပ်တွေကို ပွတ်သပ်၊ နို့သီးခေါင်း လေးတွေကို လက်နဲ့ plucking လုပ်၊ ခပ်ပါးပါးဘောင်းဘီအောက်မှာ ရုန်းကြွနေတဲ့ သူ့တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင်း အမြှောက် တစ်လက်လို့ ချိန်တွယ်နေတဲ့ အတံကြီးကိုလည်း မသိမသာပွတ်သပ်လိုက်ပါသေးရဲ့။ ကျွန်တော် အားမရတောဘူး အဲ့ဒါကြောင့် အစီအစဉ်ပြောင်းကာ ဂိုထောင်ထဲက အိပ်ခန်းငယ်လေးထဲကို ခေါ်သွားလိုက်တယ်။ ခုတင်ခြေရင်းနား မလှမ်းမကမ်းကနံရံမှာရှိသော ချိန်းကြိုးကိုယူ သူ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲဖြဲလိုက်တဲ့နောက် Bigboyရဲ့ ခြေလက်တွေရှိ သားရေလက်ပတ်က ကွင်းတွေကို ချိန်းကြိုးများဖြင့် ဆက်ပြီး ချည်နှောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့လက်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ရှေ့ပိုင်းရောက်အောင်ဆွဲမယူနိုင်တော့ပါဘူး။ ချိန်းကြိုးအတိုလေး ကိုတော့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ချိတ်ပေးထားလိုက်တယ် ခပ်မြန်မြန်ထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ လတ်တလောတော့ သူဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
ပြူးကျယ်စပြုတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်သမျှ သူလိုက်ကြည့်ပါတယ် ပါးစပ်ကတော့ အသံမပြုပါဘူး။ နောက်တော့ ကျွန်တော် ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်တွေကို ကိုယ့်ဖာသာစချွတ်ပါတယ် ခပ်ဖြေးဖြေးပေါ့။ ဘောင်းဘီကိုချွတ်တယ် ပြီးတော့ အပေါ်က၀တ်ထားတဲ့ အင်္ကျီကို လည်းချွတ်တယ် တစ်ကိုယ်လုံးဝယ် သားရေ boot ဖိနပ်ကလွဲလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေ။ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ တက်တူးခပ်များများ၊ ပြီးတော့ ချက်ရယ် နို့သီးခေါင်းလေးတွေရယ် သတ္ထုကွင်းလေးတွေကိုဖောက်ပြီးတပ်ထားတာ ငပဲခေါင်းတောင်နာမှာစိုးလို့မတပ်ဘဲနေတယ်။ အာ…ဘာမှလုပ်စရာမလိုသေးဘူး အခုလိုလုပ်နေတာနဲ့တင် ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ဒုံးပျံကမိုးပေါ်ထောင်နေပါပြီ။ သူ့ငပဲသည်လည်း ကျွန်တော့်အတိုင်း တဖြည်းဖြည်းမတ်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ငပဲက ကျွန်တော့်ထက်ပိုကြီးသလို ပိုပြီးတော့လည်းတုတ် တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် သူ့ရင်အုပ်တွေရယ် ဗိုက်သားတွေရယ် ပေါင်ကြွက်သားတွေကို အတန်ငယ်ဖျစ်ညှစ်ပြီး ပွတ်သပ်လိုက်တော့ ငနဲရဲ့ အသက်ရှူသံဟာ မြန်ဆန်လာသလို သူ့ငပဲက ဟိုသည်လှုပ်ရှားလာပါရဲ့။
ကျွန်တော့်လက်ဆွဲ Nikon ကင်မရာလေးသွားယူတဲ့ပြီး သူ့ဓာတ်ပုံကိုအမှတ်တရသဘော ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါ တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ Share မလုပ်ပါဘူး သူ့ကိုတော့ Share ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကတိနဲ့ရိုက်ယူရတာပါ။ အစကတော့ သူ အတင်းငြင်းဆန် မယ်ထင်ထားတာ။ ဒါပေမဲ့ သူ……သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနဲ့သရပ်တယ်…ကျွန်တော်ပြုမူသမျှကို အသာငမ်းငမ်းတပ်မက်စပြုလာဟန် ပြပါတယ်။ တကယ့် Tempo မြင့်လာတဲ့အချိန်ရောက်ရင် ဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်မလားလို့။
ကျွန်တော် ဘီရိုအံဆွဲထဲက ချောဆီဘူးကြီးကို သွားယူလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က သူ့ခရေတ၀ိုက်ရွှဲအောင်လုပ်ပြီး ပွတ်သပ်ကစားသလို အခြားလက်တစ်ဖက်ကတော့ အားရစရာ သူ့ငပဲကိုပွတ်သပ်ကစားပါတယ်။ အခြားသူတွေတုန်းကလို ပွတ်သပ်နှိုးဆွစရာသိပ်မလိုဘဲ ကျွန်တော့်အတို့အထိမှာပဲ သူ့ခြေချောင်းတွေကွေးကောက်စပြုပါရဲ့။ တင်သားဆိုင်တွေကို ပွတ်သပ်ရတာ သူ့ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ရတာ အတော့်ကို အားရ၀မ်းသာရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော် ကင်မရာကိုနောက်တစ်ကြိမ်လှမ်းကိုင် အခန်းမီးကို အမှောင်ချ သူနဲ့မနီးမဝေးမှာ စားပွဲတင်မီးလေးကို မလင်းတလင်းလေးထွန်းပြီး Bigboy ရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့လိင်တံကို အသားပေးမြင်ရမယ့် ဓာတ်ပုံတွေကို ဖန်းတီး ရယူလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ အခန်းမီးကိုပြန်ဖွင့် ဗီဒီယိုကင်မရာတွေကို မတူတဲ့နေရာချိန်တွယ်တပ်ဆင်လိုက်ပါတယ် မတူတဲ့မြင်ကွင်း တွေကနေ မလွတ်တမ်းရိုက်ချက်အပြည့်ရယူနိုင်တာပေါ့။ အလင်းအမှောင်ချိန်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော် ညီဇော်ပဲထားပါတော့ လက်တွေ ခြေထောက်တွေမှာ ချိန်းကြိုးတွေတွဲချိတ်ထားတာကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်မလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ သူရပ်နေသော အခန်းနံရံနားကိုသွားကာ သူ့ကို အနေအထားပြောင်းဖို့ ခပ်တိုးတိုးညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တော့ ကောင်းကောင်းအိပ်လို့ရမယ့် အပေါ်ထပ် ဧည့်ခန်းမှာ မထားချင်လို့ယူလာတဲ့ ဆိုဖာခုံရှည်ရဲ့ လက်ရန်းပေါ်မှာ သူ့ခပ်ထွားထွားတင်တွေကိုတင်ကာ လှဲအိပ်ချလိုက်ပါရော။ ခပ်ကားကား မလုပ်နိုင်လို့ ခပ်ကွေးကွေးမထားတဲ့ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အသာထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို ကျွန်တော် အသာဖိညှစ်ချိန်မှာ ဗီဒီယိုကင်မရာတွေက စတင်လှုပ်ရှားပါပြီ။ တော်တော်နုညံ့တဲ့အသားဆိုင်တွေပါပဲ အာ…..သူ့ခရေ၀ကို ချောဆီတွေသုပ်လိမ်းရင်း တွင်းနှိုက်မိသလို လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်ငပဲကိုကိုင်ကာ ဆွရပါတယ် မာသထက်မာအောင်ပေါ့။
ကျွန်တော် ညီဇော်ကို ဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းပြောလိုက်တော့ သူ နည်းနည်းတုန့်ဆိုင်းတဲ့လေသံနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေမှာတော့ ကျေနပ်လွန်းလို့တောက်ပနေသလို ဆာလောင်နေတဲ့အရောင်တွေလဲ့နေတာသေချာတယ်။ တင်သားတွေကိုရော သူ့ရွှေဥတွေကိုရော ချောဆီတွေနဲ့ ပွတ်သပ်လိုက် ခရေ၀ကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးထိုးကလိလိုက် ၅မိနစ်လိုက် ဆွပါရဲ့။ခပ်ဟဟ ဖြစ်စပြုတဲ့ တင်ပါးတွေကို အသာဖြဲကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကွန်ဒွန်တစ်ခုစွပ်ရင်း တွင်းအောင်းလိုက်ပါတယ်။ တကယ့် ခပ်ဖြေးဖြေးလေးသွင်းပေမယ့် သူ့ခရေ၀အကုန်ပြည့်သွားပါရော။ ပွတ်သပ်တာရော ကျွန်တော့်ငပဲ စသွင်းချိန်မှာရော သူ့နှုတ်ဖျားက မိန့်မိန့်မူးမူးအသံတွေထွက်လာသလို တဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားလာရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုကလည်း တကယ်လန်းတယ်။ လှပလုံးဝန်းတဲ့ တင်သားပုံရိပ်တွေကို သဘောကျနေတဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ်လိုချင်တာကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့လူလို ဖြစ်နေရရော။
လိင်တံ အဆုံးထိ တစ်ချက်ဖိသွင်းလိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းထိတဖန်ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်လိုက်တိုင်း နင့်ကနဲနင့်ကနဲဖြစ်အောင် ကျွန်တော် ကစားပစ်လိုက်တယ်။ “-င်က အရမ်းမိုက်တာပဲကွာ ကြပ်နေတာပဲ၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကလည်း လျှာနဲ့ကလိရတာ အရမ်းမိုက်တယ် ရဲနေတာပဲ၊ မင်း မျက်လုံးတွေ မျက်ဖြူလန်တဲ့အထိ ဆောင့်-ိုးပစ်မှာ တကယ်…ဆောင့်-ိုးမှာ အာ” ကျွန်တော် အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ် ၀ယ် cyber fuck လုပ်စဉ်တုန်းကစကားလုံးတွေအတိုင်းသုံးနှုံးပြောဆိုကာ လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့် သူ့ကိုနှိုးဆွရာ သွေးဆူအောင်လုပ်ရာမှာ အရာရောက်လွန်းပါရဲ့။
“မင်း ငါ့ကို သောက်ရမ်းလိုချင်နေတာဆို….အခု chat room ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူး အ…အ….ငါ့-ီးကို မင်း-င်ထဲအဆုံးထည့်ထားချင်တာ ဆို။ အခုအဆုံးထိဆောင့်ထည့်နေပြီ….အာ…ပြီးတော့ ပြန်ဆွဲထုတ်တယ်ကွာ…..ဆောင့်ရတာ အားမရဘူးကွာ….မင်းကော အားရရဲ့လား? မင်း…..ငါ့ကိုစောင့်နေတာ တစ်ပါတ်လောက်ရှိပြီ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား? မင်းကို သောက်ရမ်းအော်အောင်လုပ်ဦးမှာ…အော်စမ်းကွာ..ကဲ အော်စမ်း…..မင်း…..ငါ့အပြင် အခြားဘဲတစ်ပွေနဲ့ တွေ့ဖူးလား…..မတွေ့ဖူးသေးဘူးမဟုတ်လား အာ”
သူ့ရဲ့ ဟုတ်မှန်ကြောင်း တုန့်ပြန်သံက အတော့်ကို မှိန်ဖျော့နေလေရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူ ဘယ်လောက်ထိတောင် နစ်မျောနေတယ်ဆိုတာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ တုန့်ပြန်မှု၊ တစ်ချက် တစ်ချက် အဆက်မပြတ်ဆောင့်သွင်းလိုက်သော ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင် မှုတွေမှာ အော်ညည်းလိုက်သော လှိုက်မောသံတွေဟာ နာကျင်မှုနဲ့သာယာမှုရောယှက်နေမယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါတော့ သူ့တင်ကြွက်သားတွေနဲ့ ညှစ်ကာ ညှစ်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲသူ့ခရေ၀ထဲအတင်းမတိုးဝင်အောင်ထိန်းသေးတယ်။ အဲ့လိုသူလုပ်တဲ့အခါဆိုရင် ကျွန်တော်အရှိန်ကိုနည်းနည်းလျှော့ အဆုံးထိတစ်ချက်ဖိ အကုန်လုံးအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လုပ်ကာ သူ့ prostate ကိုထိအောင် ထိုးထိုးကော်ပေးဖြစ်ရဲ့။ညီဇော်ခမျာ ခေါင်းကို အသာမော့ သာယာမိန့်မူးစွာ အော်ညည်းတာပေါ့နော်။ သူစိတ်ကူးထားတဲ့ သာယာမှုကို ကျွန်တော်က ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။
သူ့ညည်းသံသိပ်မပြင်းတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက် ခပ်သွက်သွက်ပြန်လည်ဆောင့်သွင်းပါတယ် တစ်ချက် တစ်ချက် တစ်ချက် …..သူ့ပေါင်တံတွေကို ပခုံးထမ်းထားရင်းက အသာလွှတ်လိုက်ကာ ဘေးစောင်း ပုစွန်ကွေးအိပ်ခိုင်းလိုက်ရင်း ဘေးကနေ အလိုက်သင့်နေကာ ငပဲကိုပြန်ထည့်ရပါတယ်။ ရှည်လျားတဲ့ငပဲဟာ ဆောင့်သွင်းချက်ကြောင့် ကွေးညွှတ်သလိုဖြစ်ရင်း သူ့ prostate ကို ပိုပိုသာသာထိမိတယ်ထင်ပါတယ် ညီဇော်မျက်ဝန်းတွေဟာ မှေးမှိတ်လို့။ ရင်အုပ်တောင့်တောင့်ပေါ်က မာနေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေး တွေကိုလည်း ကျွန်တော် အသာအယာလျှာနဲ့ဝေ့၀ိုက်သလို သွားလေးနဲ့လည်း မသိမသာဖွဖွကိုက်တာလည်းလုပ်တယ်။ အိုး….သူ ခရေကြွက်သားတွေကို သုံးလေးချက်မက ညှစ်ပြုလာချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုမှန်းမသိ မထိန်းနိုင်တော့တာကြောင့် သူ့တင်ပါးကို တစ်ချက် ပုတ်ခပ်သတိပေးကာ အရင် ထရပ်ရင်း ငပဲကို မြန်မြန်ဆွဲထုတ် ကွန်ဒုံးကို အသာဆွဲချွတ် သုက်ရည်တွေကို လေထဲဝဲပျံသွားအောင် ပန်း ထုတ်ပစ်လိုက်တာ ညီဇော့် ရင်အုပ်တွေ ဗိုက်သားတွေပြီးတော့ ဆိုဖာပေါ်မှာကောရွှဲကုန်ရော။ ကင်မရာသုံးခုအတွက် ရိုက်ချက်ကောင်း ကောင်းရမည့်ခြေရာတွေ။
နောက်တော့ ကျွန်တော် ထရပ်လိုက်ကာ ကင်မရာတွေကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုဖာရှိရာကိုပြန်လာပြီး တဘက်ဟောင်း တစ်ခုနဲ့ ညီဇော့်ကိုယ်ပေါ်ရှိသုက်ရည်တွေအကုန် သုတ်သင်ရှင်းလင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ လုပ်သမျှအားလုံး ကျွန်တော်ဘာအသံမှမပြု ဘဲ တိတ်တဆိတ်သာလုပ်ဆောင်နေရာမှာ ညီဇော်ရဲ့ သက်ပြင်းမောရယ် ညည်းညူသံအချို့ရယ် လက်ပြန်တုပ်ထားတဲ့ ချိန်းကြိုးများရဲ့ ရွေ့လျားသံများရယ်သာကြားရပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှမပြောသေးတော့ သူ ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိ အိပ်မက်ထဲကအတိုင်းအပြင်မှာ လက်တွေ့ခံစားနေတဲ့အာရုံများမှာသာ မိန့်မူးနေပုံပေါ်ပါတယ်။
ဂိုထောင်ဝန်းကျင်အနှံ့ သုက်ရည်အနံ့များထောင်းကနဲ ထသွားသလို ညီဇော်မျက်ဝန်းတွေက ဝေ့၀ိုက်နေတုန်းရှိသေးတယ် ဖွင့်ဟခြင်း တောင်မလုပ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အနားမှာ ခဏ၀င်ထိုက်လိုက်ကာ အားပြန်ဖြည့်နေလိုက်တယ်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြန်တော့ ညီဇော့်ကိုယ်လုံးကို ပြန်ပြီးနေရာချကာ ရာဘာကွင်းတစ်ခုကိုယူ သူ့လိင်တံအရင်းမှာစည်းကြပ်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့လိင်တံပြန်လည်မာတောင့်လာဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပါရော။ ပြန်လည်မာတောင့်လာတာသေချာသောအခါမှာတော့ ကျွန်တော် ဗီဒီယိုကင်မရာတွေကို ပြန်ထဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေပွင့်ဟလာကာ ကျွန်တော်လုပ်သမျှကို အစာ ငမ်းနေတဲ့ ကောင်ငယ်လေးတစ်ယောက်လို လျှောက်ကြည့်ပါရဲ့။ မပျော့တပျော့ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုလည်းကြည့်တယ် လမ်းလျှောက်တိုင်း နိမ့်မြင့်ဖြစ်သွားတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေကိုရောသူငမ်းတယ် နောက်တော့ မထူတထု ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းလို ဟန်ဖြင့်ကြည့်တယ်ဗျ။ ကင်မရာတွေသေချာပြီလားကြည့်လိုက်ပြီးနောက် သူ့အတွက် စပါယ်ရှယ် နှုတ်ခမ်းအစုံကိုကျွန်တော် ဆိုဖာဘေး ခုံအံဆွဲထဲက ယူလိုက်ပါတယ်။
ရာဘာသားနှုတ်ခမ်းသားတွေ လည်မျိုလိုပြွန်တွေကို လျှပ်စစ်ဓာတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်လျှပ်စစ် စီးဆင်းနေပြီး ဘက်ထရီသုံးဖြစ်ကာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အရာပါ။ အရှိန်အနိမ့်မြင့်ညှိလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် မသုံးတတ်ရင် နာကျင်မှုပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုပါတော့။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တုန့်ပြန်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားတာနဲ့ ချွေးစို့တတ်တာပါ။ အဲဒါကလဲ အခု ကင်မရာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တော့ အတော်ဖြစ်သွားတယ်။ ညီဇော်ကတော့ ecstasy သောက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကျွန်တော်လုပ်သမျှအတိုင်း စီးမျော နေတာပါ ငြင်းဆိုမှုတစ်ခုမှကို မလုပ်ပါဘူး။ ကဲဒီတော့ ကျွန်တော်ခဏနေကပြောထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ သူ့လည်တိုင်၊ သူ့ရင်အုပ် တစ်ဝိုက်နှင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေ၊ နံကြားတလျောက်၊ ပြီးတော့ သူ့ဗိုက်ကြွက်သားပြင်တလျောက်၊ချက်ပေါက်လေး၊ ဆီးစပ်တစ်ဝိုက်၊ ပေါင်ခြံတစ်ဝိုက်၊ လိင်တံနှင့်ရွှေဥ စတာတွေကိုနမ်းတယ်။ လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းနိမ့်တယ်ဆိုပေမယ့် ထိမှန်း တို့မှန်းသိသာတယ်ဆိုတော့ ကျေနပ်မှုနဲ့အတူ နာကျင်မှုရောထွေးနေမလားဘဲ။ ညီဇော်ကတော့ ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်တို့လိုက်တိုင်း သူ့ငပဲရှိရာကိုပြန်ကိုင်ချင်တဲ့ ဟန်ပြတာကြောင့် လက်နှစ်ဖက်က သံကြိုးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နုညံ့လှတဲ့ သူ့ပေါင်အတွင်းပိုင်းနေရာတွေ၊ တင်သားဆိုင်တွေ၊ သူ့ရွှေဥတွေ၊ ပြီးတော့ သူ့ခရေ၀ကို တကယ့်ခပ်ရွရွလေး ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့ပေး တို့ထိကလိပေးပါရဲ့။ တစ်ချက် တစ်ချက်တို့လိုက်တိုင်း ညီဇော် သူ့ငပဲသူကိုင်ကာ လက်ကစားသလို နှုတ်ဖျားကလည်း အားရပါးရအော်ညည်းပါတယ်။
ညီဇော် လက်တစ်ဖက်ကို ဘေးကိုရွေ့လိုက်တော့ ထိပ်အရေပြားမဖြတ်ထားသော ကျွန်တော့်ငပဲကိုသူထိမိကိုင်မိသွားတယ်။ ဒီတော့ သူအားရပါးရဆုပ်ကိုင်ကာ ကစားပါရော။ ခဏနေက တို့ထိနေတဲ့ ပါးစပ်နှင့်လည်မျိုပါ ရာဘာတုအရုပ်လေးကိုဘေးနားချထားလိုက်ပြီး လိင်တံအတုထိပ်မှာတပ်ထားတဲ့ vibrator ကိုယူလိုက်ပါတယ်။ ခလုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ လည်ပတ်လိုက် ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်ဖြစ်လိုက် လှုပ်ရှားလာပါရော။ ကျွန်တော် ချောဆီအနည်းငယ်ကို ညီဇော့်ခရေ၀မှာဆွတ်ပေးလိုက်ပြီးနောက် တွန့်လိမ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ လိင်တံအတု ထိပ်ပိုင်းလေးနဲ့ ကလိလိုက်ပါတယ်။ အဆုံးထိမသွင်းဘဲ ထိပ်ပိုင်းလေးပဲသွင်းကာ လှုပ်ရှားစေတော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံတွေ တမိန့်တမူးထွက်လာသလို သူဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲသည်လည်း ပြန်လည်မာတောင့်လာပါတယ်။ အိုး…..fuck…..စိတ်တွေ သောက်ရမ်းပြန်ထန်လာပြီ။ သူ့အော်ညည်းသံဟာ ဘယ်လိုဆေးများထည့်ထားပါလိမ့်။ သွားစမ်းဟာ…..သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ချိန်းကြိုးကိုပါဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
လွတ်လပ်သွားတဲ့ သူ့ခြေနှစ်ဖက်ကို ဆိုဖာအစွန်းကဆွဲချလိုက်ကာ သူ့ကိုကြမ်းပြင်ကော်ဇောမှာ လှဲလျောင်းစေလိုက်ပါတယ်။ ထိုးမွှေထားတဲ့ လိင်တံအတုဒဏ်ကြောင့် ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ ခရေ၀ကိုမြင်ရတဲ့ခဏ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဆက်ပြီး နှိုးဆွမှုဆက် မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို ကျွန်တော့်ငပဲမှာစွပ်လိုက်ရင်း manually သွင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ လေးဘက်ထောက်ခိုင်းလိုက်ကာနောက်ကနေ စက္ကန့်မဆိုင်းအဆုံးထိကိုအရှိန်နဲ့လျောကနဲသွင်းပစ်တာ ကျောကော့အော်ညည်းတဲ့ သူ့ကို မညှာတော့ဘဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်-ိုးပါရော။ လက်တွေကတော့ သူ့ရင်အုပ်တွေကို လှမ်းညှစ်သလို တင်ပါးတွေကိုလည်း တဖမ်းဖမ်းမြည်အောင်ရိုက်ခတ်လိုက်တာပေါ့။ ခဏနေက နှေးနေတဲ့ရေအလျဉ်ဟာ ရေတံခွန်တစ်ခုလိုပဲ တဟုန်ထိုးစီးဆင်းပြီပေါ့။ ခြောက်လက်မနဲ့ ငါးစိတ်လောက်ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ သူ့ခရေဂူထဲကိုတွင်းအောင်းတာများ တဖောင်းဖောင်းပါပဲ။ သူ အတွေ့အကြုံ သိပ်မရှိဘူးဆိုတာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလား အပေးအပြု အအော်အညည်းတွေဟာ တကယ့်ကို တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ကြွစေပါတယ်။
သိပ်ကိုမိန့်မူးနေပါပြီ ကင်မရာတွေ ချိန်ထားတာကိုလည်း ဂရုမစိုက်တော့ဘူး ရိုက်ချင်သလိုရိုက် ဘယ်လိုမြင်ကွင်းတွေဖြစ်နေမလဲ မသိတော့ဘူးဗျာ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပုံစံမျိုးစုံ နှစ်ယောက်သားလှုပ်ရှားကြတာများ အနေအထားဘယ်လိုဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပါ။ ပထမတစ်ကြိမ်ပြီးထားတာဆိုတော့ အခုစိတ်ကြိုက်ဆွဲလို့ရနေတယ်လေ။ အခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ ကျွန်တော် ကော်ဇော်ပေါ်မှာ ပက်လက်ဖြစ်နေပြီး သူကတော့ အပေါ်ကတက်ထိုင်ကာ Cowboy တစ်ယောက် မြင်းစီးသလို ဒုန်းဆိုင်းစီးနေပါရဲ့ဗျာ။ ကုတင်ပေါ်များလုပ်မိရင် ကျိုးကျလောက်ပါတယ်။ “Whooeee!!! Ride`em, Cowboy!”
သူက မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ချနေတာဆိုတော့ သူ့ပေါင်ခြံက ငပဲထွားထွားကြီးကလည်း တရမ်းရမ်းနဲ့ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေကို ရိုက်ခတ်နေသလို….အာ….သူ့ခါးအဆုံကိုလှမ်းကိုင်ထိန်းပေးရင်း ခဏငြိမ်ခိုင်းလိုက်ကာ ကျွန်တော်အောက်ကနေ အဆတ်မပြတ်ကော့ ပြီး စက်သေနတ်ပစ်သလိုဆောင့်ပစ်လိုက်ပါတယ် ခဏပေါ့။
အရှိန်နည်းနည်းလျော့ဖြစ်တဲ့ခဏ သူက သူ့ငပဲသူကိုင်ကာ လက်ကစားသလို ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ပေါင်တံတွေကိုထိန်းကိုင်ထားရင် အောက်ကနေ မွှေပါတယ်။ မွှေနေရင်းမှ တစ်ချက်တစ်ချက်ပင့်ထိုးလိုက်စဉ်မှာတော့ ညီဇော်မထိန်းနိုင်တော့ဘူးထင့် ကျွန်တော့်ဗိုက်သား တွေ ရင်အုပ်တွေပေါ်သာမက မျက်နှာရှိရာကို တရှိန်ထိုး သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်တော့တာ မနည်းရှောင်လိုက်ရပါတယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့တို့ သလို ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့်သူဖြစ်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲသူမှောက်ချပြီး ကျွန်တော့်ပါးပြင်အနှံ့ နဖူးတွေ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းကို အားရ ပါးရနမ်းတယ်ပေါ့။ ခပ်ပြင်းပြင်း ညှစ်ဆုပ်လိုက်တဲ့ သူ့ခရေကြွက်သားများကြောင့် အထုတ်အသွင်းနှေးနှေးလုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို အပြင် ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ကွန်ဒုံးကိုချွတ်ရင်း ခပ်သွက်သွက်လက်ကစားပြီးနောက် အပေါ်ကမှောက်အိပ်နေသော သူ့ဆီးစပ်တစ်ဝိုက်ကို ပူနွေးနေအောင် ပန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် သုက်ရည်တွေ။ နောက်တော့ ချွေးရွှဲနေတဲ့ သူ့လည်တိုင်အနှံ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ခမ်း သားတွေနဲ့ တရှိုက်မက်မက်နမ်းလိုက်တယ် ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား ဖက်တွယ်လျက်အနေအထားဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ငြိမ်သက်မိန့်မူးသာယာနေကြတာ မိနစ်အတော်များ များကြာပါတယ်။
“ကဲ…..Cyber fucking လုပ်တာနဲ့အပြင်မှာ လက်တွေ့လုပ်တာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ ပိုကြိုက်လဲဟင်?” လို့သူ့နားရွက်နား ခပ်တိုးတိုး ကပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။
“Amazing. ငါ့ကို မင်းအိမ်ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာ ဘာတွေရှိတယ် အခုပြမလား…ပြပါလားကွ” သူ ခွထားတဲ့ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေထဲ က ထရပ်အ၀တ်တွေဝတ်ရင်း သူ ကျွန်တော့်ကိုတောင်းဆိုတယ်။
အင်…..သူ အခုအချိန်ထိ မကြောက်မရွံ့ မြေအောက်ခန်းကို သွားချင်နေသေးတာပဲ။ စနောက်တဲ့သဘောနဲ့ သူ့ကိုဘာတွေရှိတယ် ဆိုတာ ပြောပြခဲ့တာကို သူစူးစမ်းချင်နေသေးတာ။ အဟား…..ရှေ့ကလူတွေရဲ့သွားရာလမ်းကို သူလျှောက်ချင်နေတဲ့သဘောပေါ့။
ကျွန်တော် ကင်မရာတွေပိတ်၊ အိမ်ရှေ့မီးခပ်မှိန်မှိန်ကိုသာထွန်း၊ မြေအောက်ခန်း ရှိရာဘက်ကို သူ့ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။ ဟင်းဟင်း… ရင်တွေပြန်ခုန်လာပြီ ဟား ဟား……။
Alex Aung (24 Feb 2015)
စာကြွင်း ။ ။ မရေးတာလည်းကြာ ရေးတတ်သလိုလေးရေးထားတာကြောင့် သည်းခံဖတ်ပေးကြပါလို့နော်။
Posted by Alex Aung at 1:44 PM No comments: